Thomas Thuchel oo ka hadlay go'aankii uu ku bedelay Callum- hudson-odio.
Home Horyaalka Ingiriiska Thomas Thuchel oo ka hadlay go’aankii uu ku bedelay Callum- hudson-odio.
Thomas Thuchel oo ka hadlay go’aankii uu ku bedelay Callum- hudson-odio.
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa laba jibaaray go’aankiisii ahaa inuu bedelo Callum Hudson-Odoi 30 daqiiqo ka dib markii uu barbaro 1-1 ah la galay kooxda Southampton.
Tuchel wuxuu abuuray khilaaf dhab ah markii uu ciyaarta ka saaray garabka da ‘yarta qeybtii labaad, iyo go’aankiisa ah inuu si cad u qirto inuusan ku qanacsaneyn habdhaqanka Hudson-Odoi iyo heerka shaqada kaliya ayaa ka sii daray arrimaha kale.
Tababaraha ayaa ku adkeystay inaysan aheyn go’aan shaqsiyadeed isla markaana uu yahay mid uu u ciyaaro wanaagga kooxda, waxaana uu mar kale ku adkeystay in Hudson-Odoi uu weli fursad u leeyahay inuu ku bilowdo kulanka talaadada Champions League ee ay la ciyaarayaan Atletico Madrid.
Tuchel ayaa yidhi (iyada oo loo marayo websaydhka rasmiga ah ee kooxda). Waan la hadlay Callum, waana la hadlay kooxda oo dhan. Mararka qaar, waxyaalahan waxay ka dhacaan kubada cagta waxayna ahayd go’aankeyga.
Waxaa laga yaabaa inaan ku dhibay isaga sababtoo ah wuxuu ahaa dhinaceyga garoonka waana ku dhawaaday isaga, laakiin ma aanan dareemin inuu runtii galay ciyaarta. Uma maleyneyn inuu gebi ahaanba af badan yahay waana sababtaas sababta aan go’aan adag uga qaatay isaga. Laakiin go’aankaasi wuxuu ahaa daqiiqada iyo maalintaas oo keliya. Aniga ahaan, tani dhab ahaan maahan wax weyn oo waxay noqotaa mid keliya haddii dadku rabaan inay ka hadlaan.
“Callum wuxuu ii ahaa wax cajiib ah ilaa iyo haatan isaga ayayna saaran tahay inuu i tuso in ciyaar kasta iyo maalin walba tababarka. Waxaan rabaa inuu i tuso inuu yahay nin lagu kalsoonaan karo kooxda markii uu ka soo kaco kursiga keydka, sida uu yahay marka uu bilaabayo.
Waxa uu bilaabay ciyaaro badan aniga tusaale ahaan, wuxuu qaatay go’aan adag. Haatan waa inuu liqaa oo uu u soo baxo tababar diyaar u ah inuu ka hor ciyaaro Atletico, oo ah ciyaar uu haysto fursad kasta oo uu ku bilaabo.
Marka laga soo tago Hudson-Odoi, Tuchel waa inuu go’aan ka gaaraa weeraryahan Tammy Abraham, kaasoo ahaa ninka lagu bedelay garabka qeybtii hore ee kulankii Southampton Tababaraha ayaa qirtay Abraham inuu ku dhibtooday inuu saameyn ku yeesho ciyaarta, laakiin haddii la siin doono fursad uu kaga cafiyo qaladkiisa ayaa weli la arki doonaa.
Olivier Giroud ayaa sugaya baalasheeda, isagoo ka soo baxay afartiisii gool ee uu ka dhaliyay Sevilla intii lagu jiray bilowgiisii Champions League, waxaana laga yaabaa inuu Tuchel doorbido inuu u yeero qof khibrad u leh kulanka weyn.
In kasta oo Atletico ay tahay hoggaamiyeyaasha La Liga, haddana waxay ku soo bixi doonaan kulankaan qaab ciyaareed xun – hal guul afartii kulan ee ugu dambeysay – waxaana sidoo kale lagu daciifin doonaa maqnaanshaha Kieran Tripper, Yannick Carrasco, Hector Herrera iyo Chelsea bartilmaameedka xidiga u ah Jose Gimenez.
Previous articleJordan Henderson oo ka baqaya inuu seego waajibaadka England kadib dhaawaca gumaarka ee Soo gaaray.
Next articleDaafaca Liverpool Andy Robertson oo ka hadlay wararka sheegaya in qolka labiska ay isku dagaaleen Alisson Becker